बाह्रखरी - अस्मिता रिजाल बुधबार, माघ ७, २०७७
काठमाडौं । नेपालमा पुसयता कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ । असोज र कात्तिकमा उच्च विन्दुमा पुगेको संक्रमणदर मंसिरपछि भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना नदेखिए संक्रमण निर्मूल हुनसक्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।
यस्तो थियो असोजदेखि मंसिरसम्मको तथ्यांक
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक असोजको पहिलो साता हेर्दा दैनिक दुईदेखि पाँचजनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । जतिबेला झन्डै १२ हजार मानिसमा पीसीआर परीक्षण गर्दा एक हजारदेखि एक हजार ५ सयसम्म नयाँ संक्रमित देखिएका थिए । तर असोजकै दोस्रो साताबाट संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको देखिन्छ । असोज १९ गते १९ जना र २५ गते २२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
कात्तिक पहिलो साता पनि मृतकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । कात्तिक ७ गते १६ हजार ८ सय ३३ जनामा परीक्षण गरिएकामा चार हजार चार सय ९९ संक्रमित भेटिए । सोही दिन १७ संक्रमितको मृत्यु भयो । यही दरमा रहेको संक्रमितको संख्या कात्तिकको मध्यतिर बढेर गयो । कात्तिक १९ गते नेपालमा कोरोना महामारी अवधिकै सबैभन्दा धेरै ३० जनाको मृत्यु भयो भने ३ हजार ३ सय ९ जना नयाँ संक्रमित भेटिए ।
कात्तिक २६ गते पनि मृतकको संख्या २६ पगेको थियो । यसरी उकालो लागेको मृतकको संख्या मंसिर लाग्दै गर्दा केही घटेको देखियो । मंसिर पहिलो साता न्यूनतम १० देखि १६ जनाको मृत्यु भएकामा १४ गते यो संख्या २५ पुग्यो ।
यतिबेलासम्म सरकारले परीक्षणको दायारा घटाइसकेको थियो । मंसिर २१ गते १० हजार ९६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ६ हजार ४ सय ९५ नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए तर मृतकको संख्या भने १७ पुगेको थियो । यसरी असोज पहिलो साताबाट मंसिर अन्तिमसम्म आइपुग्दा नेपालमा एक लाख ९० हजार ६ सय ७ जना संक्रमित थपिए र कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ५० हजार १ सय ८० पुग्यो । यो तीन महिनाको अवधिमा नेपालमा ९ लाख ६० हजार ६ सय ६ जनाको पीसीआर गरिएको थियो ।
यही अवधिमा नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि कोरोना अवधिकै उच्च रह्यो । असोजको पहिलो सातादेखि मंसिर अन्तिम सातासम्म १३ सय ४७ जनाले ज्यान गुमाए र नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार ७ सय ३० पुग्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यही तीन महिनाको अवधिलाई कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको अवधिका रुपमा लिएको छ ।
पुसमा संक्रमणदर कोरोना अवधिकै कम
३ महिना उच्च विन्दुमा पुगेको कोरोना संक्रमणको दर पुस लागेपछि भने घट्दै गयो । पुसको पहिलो साता सात हजारको हाराहारीमा परीक्षण भएकामा सात सय ४२ संक्रमित भेटिए । जसमध्ये सातजनाको मृत्यु भयो । पुस ७ गते तीन महिनाकै सबैभन्दा कम तीन संक्रमितको मृत्यु भयो । तीन महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा कम मृत्यु भएको दिन पनि पुस ७ गते नै हो ।
त्यसयता मृतकको संख्या ३ देखि ७ को हाराहारीमा रहे पनि संक्रमितको संख्या भने धेरै घटेको देखिन्छ । पुसमा कोरोना संक्रमणका कारण १९४ जनाको मृत्यु भएकामा नयाँ संक्रमित भने १५ हजार २ सय २२ थपिए । पुस महिनाभरमा सरकारले एक लाख ४७ हजार ८ सय ८३ जनाको पीसीआर गरेको थियो ।
यसरी पुस ३ महिनामा सबैभन्दा कम संख्यामा कोरोना संक्रमित भएको महिना हो । त्यसैगरी माघ महिनामा संक्रमितको संख्या पुसको तुलनामा घटेको छ । माघ ५ गतेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ६७ हजार ६ सय ४४ पुगेको छ । जसमा माघ १ गतेदेखि ५ गतेसम्म नेपालमा १ हजार १ सय १ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने २२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जोखिम अझै बाँकी
विश्वको इतिहासमा कोरोना महामारी लामो समय अस्तित्वमा रहेको सरुवा रोगमध्ये एक हो । यसअघि स्वाइन फ्लु, सार्सजस्ता सरुवा रोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै फैलिएको र केही महिनामै निर्मूल भएको वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । उनका अनुसार सरुवा रोगको प्रकृति फरक-फरक हुन्छ, कोरोना भाइरस ‘अप एन्ड डाउन’ प्रकृतिको छ । यसको असर व्यक्तिको शारीरिक संरचना र मानसिक स्थितिका आधारमा पनि निर्धारण हुन्छ ।
पछिल्लो समय घटेको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम केही मत्थर भएको भन्न सकिन्छ । तर पूरै निर्मूल हुन भने समय लाग्ने डा. पुनको अनुभव छ । कोरोनाको दोस्रो छाल (चरण) नआएमा अहिलेलाई हामी केही सुरक्षित भएको भन्न मिल्छ तर डररहित भएर हिँडडुल गर्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । नेपालमा सोमबार मात्र नयाँ प्रजातिको भाइरस पुष्टि भएसँगै कोरोनाको जोखिम अझै बाँकी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर दैनिकी चलाउन डा. पुनको सुझाव छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा इसाइ (क्रिश्चियन) धर्मावलम्बीको शव गाड्ने र पक्की चिहान... ५२ मिनेट पहिले
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण अलमलमा परेका काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जात्राहरू यसवर्ष स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मनाइँदैछन् । यसैक्रममा काठमाडौंको ठूलो... ५६ मिनेट पहिले